भारतमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने मसलाहरू के हुन्? | Absolut यात्रा
मसलाको संसार प्रभावशाली छ। मलाई मेरो भान्छाको कपाट खोल्न मन पर्छ र म त्यहाँ राख्ने दर्जनौं जारहरूको मिश्रित अत्तरको गन्ध लिन्छ, तर मलाई थाहा छ उनीहरूसँग तुलना गर्न सकिँदैन। भारतमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मसला।
भारतीय परिवारको खाना कति सुगन्धित हुनुपर्दछ! मेरो मुखमा ती रंगहरू र अरोमाहरूको बारेमा सोच्दै मात्र पानी हाल्दैछ ... तपाईंलाई मनपर्दछ भारतीय खाना? त्यसोभए, हामी आज जान्न लागेका छौं जुन भारतमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने प्रजातिहरू हुन्।
1 भारत र यसको सुगन्धित विश्व
4 केसिया बार्क
8 जायफल र गदा
9 तोरीको दाना
10 मेथी वा मेथी
भारत र यसको सुगन्धित विश्व
La भारतीय ग्यास्ट्रोनमी यसले असंख्य मसलाहरू, जमिन र भूमिहीन, एक्लो वा अरूसँग मिल्दो प्रयोग गर्दछ, त्यसैले कहिलेकाँही घरमै भारतीय डिश बनाउने आँट गर्न डराउँदछ। तर यदि तपाइँसँग थोरै अभ्यास छ र तपाइँ तिनीहरूलाई पहिचान गर्न व्यवस्थित गर्नुहुन्छ, तपाइँ पहिले नै लामो मार्गमा आइसक्नुहुनेछ।
भारतीय खाना मा विशेषज्ञहरु भन्छन् कि त्यहाँ मूलतः भारतीय खानामा ११ वटा मसला प्रयोग गरिन्छ। धेरै जसो प्रयोग गरिन्छ सुक्खा र टोस्टेड त्यसोभए उनीहरू भुइँ हुनु भन्दा पहिले उनीहरूको आवश्यक तेल निकास्न सक्दछन् र अन्य मसलाको संयोजनमा थपिन्छन्।
जे होस् मोर्टारको प्रयोग पुरानो हो, तर आज सुपर र राम्रो ग्रिन्ड प्राप्त गर्न किचन रोबोट प्रयोग गर्न सजिलो र बढी सुझाव दिइन्छ। के केहि मसलाहरू, उदाहरणका लागि कासिया बार्क, धेरै कडा हुन्छन् र मोर्टारको साथ ती पीस गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ।
मसलाको बारेमा सिक्नु महत्त्वपूर्ण छ किनभने तपाईंको खाना पकाउने प्रविधि परिवर्तन गर्दा कुनै प्रजातिलाई फरक स्वाद हुन सक्छ, वा उस्तै तरिकाले, यसलाई तयारीको अर्को ठाउँमा राख्नुमा अन्य प्रभावहरू हुन्छन्।
स्पष्ट रूपमा त्यहाँ अरु धेरै प्रजातिहरू छन्, ,०, केवल एघार मात्र होइन, तर केहि दुर्लभ वा केवल केही क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गरिन्छ उदाहरणका लागि ढु the्गाको फूल। यसैले हामी २ 40 वटा आवश्यक मसलाको उपसमूह केन्द्रित गर्न सक्छौं जुन भारतीय खाना र गत शताब्दीका पाक परम्पराहरूमा देखा पर्दछ, र त्यहाँबाट हामी अर्को उपसमूह बनाउन सक्छौं ११, सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको।
त्यहाँ छन् अलैंचीको दुई शैली जुन भारतीय ग्यास्ट्रोनमीमा प्रयोग गरिन्छ: हरियो र कालो हरियो सब भन्दा साधारण हो र मसलाको मिक्समा र धेरै विशिष्ट मिठाईहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हरियो इलायचीमा हल्का, मिठो स्वाद हुन्छ र हल्का मसलाको नोटको साथ। यसलाई बनाउँदा पूरै मिश्रण गर्न सकिन्छ मिक्सहरुक्लासिक गरम मसाला जस्तो। साथै, जब यसलाई मिठो र मिठाईहरूमा प्रयोग गर्दा खुला बीज प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कालो अलैंची धेरै गम्भिर र केही धुवाँयुक्त हुन्छ र हो वा हो तपाईंले यसलाई सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्नेछ। केही बीउहरू प्रयोग गरिन्छ र यदि तपाईं पूरै पोड प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईंले डिशको सेवा गर्नु अघि यसलाई हटाउनुपर्नेछ किनभने यदि तपाईंले यसमा टोक्नुभयो भने, मेरो भलाइ।
यो पनि एक क्लासिक प्रजाति हो, सँग एनिसको एयर, भारतीय पकवान मा धेरै चिन्न योग्य। यसको स्वाद र गन्ध यसको मजबूत आवश्यक तेलबाट लिन्छ, लगभग औषधीय। लौंग एक फूल हो र यसको तेलहरू पकाउँदा र खाना पकाउँदा प्रयोग गर्नु अघि निकालिन्छ।
तिनीहरू पूर्ण वा अन्य मसलाको साथ मिसिन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र तपाईं सावधान हुनुपर्दैन किनकि तिनीहरू हल्का छन्। एउटा क्लासिक लौंग पकवान भनेको केरला नारियल चिकन करी हो।
यो पनि भनिन्छ चीन दालचिनी, तथापि दालचिनी फरक छ। केसिया यो उत्पादन गर्न सस्तो छ र वास्तवमा, तपाईले पाउनु भएको अधिकांश जमिनको दालचिनी वास्तवमा कासिया बार्कबाट उत्पन्न हुन्छ।
भारतीयहरूले पनीरमा दालचीनीको सट्टा कासिया प्रयोग गर्छन्, यसको हल्का स्वादको फाइदा लिई, र यसलाई ठूलो मात्रामा प्रयोग गर्दछन्। यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अन्न वा जमिन र अरूसँग मिलेर। यो दालचिनी भन्दा एक राउगेर स्थिरता छ र यो ताजा छ कि छैन जाँच गर्न सजिलो छ: यदि तपाइँ यसलाई आफ्नो औंलाहरु बीचमा मास्यो यदि तपाइँ ताजा छ भने दालचिनीको गन्धको लागि सक्षम हुनुपर्दछ।
मुग्लाई पनीर करी क्यासिया क्रस्टको साथ बनेको छ।
मलाई काली मिर्च मन पर्छ। यो भारतको मूल निवासी हो, मालाबार र पश्चिमी घाट क्षेत्रबाट। सत्य यो हो कि यो एक मसला छ यो बढ्नको लागि धेरै खर्च हुन्छ किनभने यो प्रकृति र यसको चक्रमा धेरै निर्भर गर्दछ। त्यसकारण यसको मूल्यहरू जुन सधैं फरक हुन्छन्।
कालो मरिच प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले भुलिनु पर्छ र सँधै, सधैं, यसलाई अन्नमा राख्नु र पिँस्नु उत्तम छ प्रयोग गर्नु भन्दा अलि अगाडि। यो भारतीय चिली कुखुरामा राम्रो छ।
मलाई जीरा मन पर्छ, विशेष गरी जमिनको मासुको लागि मरीनेडको रूपमा। जीरा पूरै भारतमा प्रयोग गरिन्छ वा अन्य मसलाको साथ मिसिन्छ र यो धेरै भारतीय व्यञ्जनहरूमा त्यो धुवाँयुक्त टोन दिन प्रयोग गरिन्छ। यसको बीउ खैरो र धेरै सुगन्धित छन्।
ताजा जीराको प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ यदि हामी अझ गहन स्वाद चाहन्छौं। यो सजिलैसँग बल्दछ, त्यसैले यो भुलेकोमा सावधान रहनुहोस्। यदि यो पारित भयो भने, जीरा तीतो हुन्छ। आदर्श to० सेकेन्डको प्रकाश टोस्टिंग हो र त्यसपछि प्रयोग गर्नुभन्दा अघि चिसो गर्न अनुमति दिईन्छ।
यो संसारको सब भन्दा पुरानो ज्ञात प्रजाति हो, यसको साथ सुनौलो रंग, यसको स्वाद केही साइट्रिक र यसको केही न कुनै बनावट। धनिया अनाज धेरै मसलाको मिश्रणको लागि आधारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर धनिया पाउडर भारतीय भाँडामा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने प्रजातिहरू मध्ये एक हो।
जीराको मामलामा, तपाईंले सुनौलो खैरो र बिउ पानामा अलिकता उफ्रिनु भन्दा पहिले थोरै टोस्ट गर्नुपर्छ। चिकन टिक्का मसाला क्लासिक हो।
जायफल र गदा
दुबै भारतीय ग्यास्ट्रोनमीमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ताजा जायफल बाहिरी हटाउन कोटिंग हटाउनको लागि प्रशोधन गरिन्छ। बीउलाई कवर गर्ने कडा बाहिरी भाग झार्न अघि नै भाँच्न सकिन्छ र बन्न सक्छ गदा त्यो हो, गदा जायफलको शेल हो।
जब यो सुक्खा हुन्छ, यसले सुनौलो र सुन्तला रंगको बीचमा छाया प्राप्त गर्दछ र तयारीमा न्यानो र चिल्लो स्वाद थप गर्दछ। अर्कोतर्फ, जायफल सूखिसकेपछि यो लामो समयसम्म रहन्छ त्यसैले यसलाई अन्नमा किन्नु पर्दछ र यसलाई प्लेटमा वा तयारीमा सिधा ग्रेट गर्नु उचित हुन्छ।
यो पहिले नै जमिन को उपयोग गर्न को लागी धेरै दुर्लभ छ किनकि एक पटक यो grated यो तीव्रता गुमाउँछ भने, किन? मासमैन करी संग मासु जायफल छ।
बीउ कालो, खैरो वा पहेंलो हुन सक्छ र भारतीय खानामा व्यापक रूपमा ट्रेड गरिन्छ। बीउहरूले आफ्नो स्वाद दिन्छ जब भुइँमा वा तेल मा पकाइन्छ। तिनीहरूले स्मोक्ड र स्वाद जस्तै स्वाद तिनीहरू करी र करी पाउडरमा धेरै प्रयोग हुन्छन्।
साथै, रायोको तेल उत्तर भारतीय खानामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
मेथी वा मेथी
यो प्रजाति हो कि मद्रास करी पाउडरमा अभाव छैन। यो यसको गन्ध र स्वाद को लागी सुपर विशेषता हो। यस बोटको बीउ पहेंलो र सुक्खा र मसलाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, सामान्यतया भनिन्छ कसुरी मेथी।
बीउहरू धेरै गहिरो हुन्छन् त्यसैले तपाईं उनीहरूको प्रयोगमा सावधानी रहन पर्छ, लौंगहरू जस्ता। तिनीहरू परम्परागत औषधि र भारतमा फेला परेको नक्कली म्याप्पल सिरपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
भारतमा धेरै सामान्य, ताजा वा सुकाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका धेरै स्वास्थ्य लाभहरू छन् र करीमा प्रयोग गरियो र धेरै फरक मसला मिश्रणहरूमा। यसको स्वाद छ जुन सुक्खा भन्दा बलियो छ र पर्याप्त दाग, त्यसैले तपाइँ यसलाई ह्यान्डल गर्दा सावधान हुनु पर्छ।
यो एक तीखो, पृथ्वीको सुगन्ध छ र करीहरु को तिनीहरूको धनी सुनौलो रंग दिन थोरै मात्रामा प्रयोग गरिन्छ। भृजी अण्डाहरूमा हल्दी छ।
हामीलाई थाहा छ, यो संसारमा सबैभन्दा महँगो प्रजाति हो। यो यसको वजनको लागि सुन भन्दा बढी लायक छ र यदि तपाईं किन सोच्दै हुनुहुन्छ भने, यो केवल किनभने यो उत्पादन गर्न धेरै काम लिन्छ। भगवा फूलको कलंकमा केसर र हातले उब्जाउ पर्छ।
सबै भन्दा राम्रो केसर गहिरो रातो छ र यो स्पेन, ईरान वा काश्मिरबाट आउँछ। चिसो यो छ, रातो रue्ग छ कि गहिरा। यो एक अद्वितीय स्वाद छ, तर गन्ध प्रत्येक को नाक अनुसार फरक हुन्छ। केहीको लागि यो फूल हो, अरूको लागि यसलाई महको स it्केतहरू हुन्छ ... जे भए पनि, केसर गहिरो हुन्छ र थोरै परिमाणमा प्रयोग हुन्छ। यो सामान्यतया पानी वा दुधमा पहिले विघटन हुन्छ।
के तपाईं यीसँग खेल्न हिम्मत गर्नुहुन्छ? भारतीय मसला तपाईको भान्छामा?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » भारतमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने मसलाहरू के हुन्?